CJ Myanmar: facebook အသုံးပြုသူများ secure browsing အား အသုံးပြုသင့်
CJMyanmar မှ ပန်ကြားလွှာ
CJMyanmar သည် အကျိုးအမြတ် ရရှိရေး အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တည်ထောင်ထားခြင်း မဟုတ်ပါ။ CJMyanmar မှ သတင်းများကို ပြန်လည် လက်ဆင့်ကမ်း မျှဝေပေးသည့် အတွက်လည်း ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါသည်။ CJMyanmar သတင်းများကို ပြန်လည် မျှဝေရာတွင် CJMyanmar မှ CJ များ၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို အသိအမှတ်ပြုသော အားဖြင့် CJ သတင်းထောက် အမည် (CJMyanmar) သတင်းအား ပြန်လည် မျှဝေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပေးပါရန် လေးစားစွာဖြင့် အသိပေး အပ်ပါသည်။ အခြား သတင်း website များ blog များ Facebook page များ group များတွင် CJMyanmar မှ CJ များ၏ သတင်းများကို credit မပေးဘဲ သူတို့ကိုယ်ပိုင် သတင်းပုံစံမျိုး ပြန်လည် ဖော်ပြနေသည် များကို တွေ့ရှိ နေရပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ ကူးယူဖော်ပြနေ သည်ကို တွေ့ရှိပါက CJMyanmar သို့ အသိပေး အကြောင်းကြားပေးပါရန် လေးစားစွာဖြင့် မေတ္တာ ရပ်ခံအပ်ပါသည်။
facebook အသုံးပြုသူများ secure browsing အား အသုံးပြုသင့်
သတင်း - CJMyanmar၅-ဧပြီ-၂၀၁၂
ယခုအချိန်တွင် အင်တာနက် အသုံးပြုတတ်သူ လူတိုင်းနီးပါးသည် wifi ပါ smart phone များ ကိုင်ဆောင်ကာ Internet WiFi အခမဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးသော စားသောက်ဆိုင်၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များတွင် စားရင်း သောက်ရင်း အင်တာနက် အသုံးပြုမှု များပြားလာကြသည်။ သို့သော်လည်း မိမိ အသုံးပြုနေသော WiFi network ထဲရှိ အခြား အသုံးပြုသူတစ်ယောက်က မိမိ၏ facebook ကို smart phone မှ တဆင့် ဖောက်ထွင်း၍ ရနိုင်ကြောင်းကို facebook အသုံးပြုသူ အတော်များများ မသိကြကြောင်းကို mobile phone ပညာရှင် တစ်ယောက်မှ CJMyanmar သို့ ပြောကြားသည်။
ယင်း ပညာရှင်မှပင် Android OS သုံး smart phone တွင် ထည့်သွင်းထားသော facebook ကို ဖောက်နိုင်သော App (software) ကို လက်တွေ့ စမ်းသပ်ပြရာတွင် http://www.facebook.com ဖြင့် အသုံးပြုနေသော သူများ၏ facebook account များကို မိနစ်ပိုင်း အတွင်း ဖောက်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ https://www.facebook.com ဖြင့် အသုံးပြုသူများ၏ account ကိုမူ ဖောက်ထွင်းရန် ခက်ခဲသေးကြောင်း ယင်းပညာရှင်မှပင် ပြောကြားသည်။
ယင်းကဲ့သို့ WiFi network တစ်ခုတည်း အတွင်းမှ အခြားသူများ မိမိ၏ facebook account ခိုးယူ သုံးစွဲခြင်းမှ ကွင်းဝေးစေရန် facebook တွင် အောက်ပါ အချက်များ ပြင်ဆင်ထားသင့်သည်။
၁. facebook.com အပြာရောင် ဘားတန်း ညာဘက်ဆုံးရှိ အောက်ကို ပြနေသော မြှားကို နှိပ်ပြီး Account Settings ကိုရွေးပါ။
၂. Security ကို click လုပ်ပါ။
၃. Secure browsing ပေါ် click လုပ်ပါ။
၄. Browse Facebook onasecure connection (https) when possible အရှေ့တွင် ရှိသော လေးထောင့် အကွက်ထဲတွင် အမှန်ခြစ် ရှိအောင် လုပ်ပါ။ အမှန်ခြစ် ရှိပြီးသား ဖြစ်ပါက click ထပ်နှိပ်ရန် မလိုပါ။
၅. Save Changes ကို နှိပ်ပါ။
ယင်းသို့ setting များပြင်ပြီးပါက https://www.facebook.com ပေါ်နေသော address bar ထဲတွင် cursor ချပြီး https://www.facebook.com ဖြစ်သွားလား သေချာအောင် စစ်ဆေးပါ။ https://www.facebook.com မဖြစ်သေး http://www.facebook.com ဖြစ်နေပါက အပေါ် အဆင့် (၅) အတိုင်း ပြန်လည် လုပ်ဆောင်ပေးရန် လိုပါသည်။ ... Posted by
Crisis in Rakhine State, Myanmar. June 2012
News & Photos : CJMyanmar Sittwe, Myanmar (Burma). June 2012 A house on fire in Sittwe. The locals said that the Rohinga Bengal...
အကပ်အရပ်ရှိရင် အလုပ်ရဖို့ သေချာတယ်
သတင်း နှင့် ဓာတ်ပုံ - ပိုးတန်းသား , CJMyanmar ဇူလိုင်လ (၁၇) ရက် (နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ၊ ရုံးအမှတ် (၁၇)) ယခုလပိ...
ပုဂံ ရှေးဟောင်း ဘုရားများ၏ နံရံများတွင် ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်အား မသိနားမလည်သော သူများ၏ စာရေးသားမှုများကို CJMyanmar အဖွဲ့၏ ပုဂံ ခရီးစဉ်တွင် မှတ်တမ်း တင်ခဲ့ပုံ
ဓာတ်ပုံ - မောင်လှ ပုဂံ ရှေးဟောင်း ဘုရားများ၏ နံရံများတွင် ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်အား မသိနားမလည်သော သူများ၏ စာရေးသားမှုများကို CJMyan...
သတင်း - CJMyanmar ၅-ဧပြီ-၂၀၁၂ ယခုအချိန်တွင် အင်တာနက် အသုံးပြုတတ်သူ လူတိုင်းနီးပါးသည် wifi ပါ smart phone များ ကိုင်ဆောင်ကာ Internet WiFi...
စိုင်းစိုင်း မွေးနေ့ ဖျော်ဖြေပွဲတွင် Motion Graphic Animation များ ပါဝင်မည်
ဧပြီ ၁၀ရက်နေ့တွင် မန္တလေး နိုဗိုတယ်ဟိုတယ် မြက်ခင်းပြင်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည့် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် မွေးနေ့ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ၏ နောက်ခံ LED Scree...
၆၂လမ်း၊ သိပ္ပံလမ်းနှင့် မနော်ဟရီလမ်းကြား လမ်းချဲ့ထွ...
facebook အသုံးပြုသူများ secure browsing အား အသုံြး...
မန္တလေးမှ ကဗျာဆရာ၊ စာရေးဆရာများမှလည်း သံချပ်အဖွဲ့ ထ...
မဟာအောင်မြေမြို့နယ် မဲ မသမာမှုများ
အိမ်ထောင်စုဇယားမှာ ပါဝင်လျက်နှင့် မဲ ပေးခွင့်မရသူ
တူဝရီးနှစ်ယောက်စလုံး မဲပေးခွင့်မရအောင် အညစ်ခံရ
ကော့မှူး မဲရေတွက်နေပုံ SKY NET Up to Date channel ...
NLDမှ ဦးဝင်းကြည် နှင့် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခြင်း
ရန်ကုန်မြို့တွင် တက္ကစီကား စင်းရေမှာ တစ်နေ့တစ်ခြား ...
မန္တလေးမြို့တွင် မီးပျက်ချိန် များလာခြင်းကြောင့် ရေ...
Skywalk Shopping Mall ၂၀၁၂ တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည...
စိုင်းစိုင်း မွေးနေ့ ဖျော်ဖြေပွဲတွင် Motion Graphi...
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ သတင်းများ စုစည်းမှု (1-Apr-20...
တံတားဦးမှ မဲရုံ သတင်း
2012 © CJMyanmar. Picture Window template. Powered by Blogger.